Wonke amadivaysi alula emishini eyisisekelo yemoto yakhelwe ukwenza kube lula ukuphathwa, kanye nokwandisa ukuphepha komshayeli nabanye abasebenzisi bomgwaqo endleleni. Okubaluleke kakhulu ukulinganisa okukhanyayo komshini. Yibo ebumnyameni banikeza isingeniso kwabanye abanikazi bemoto nabahamba ngezinyawo mayelana nobukhulu bemoto. Ngakho-ke, kubalulekile ukulondoloza la madivaysi esimweni sokusebenza nokuhlanzekile. Izimiso zomgwaqo zibeka leli cala. Uma la madivayisi enenkinga, imoto ayinayo ilungelo lokuhambisa. Kodwa-ke, manje sizocabangela ngokuningiliziwe ezinye zezimbangela eziholela ekungasebenzi kahle kwamandla.
Enye yezinhlupho zokuqala nokuvame kakhulu ukuhlukana kwanoma yikuphi ucingo oluxhuma ohlelweni. Lokhu kungabhekwa ngokuxhuma isignali esikhethekile noma izibani zokuhlola engxenyeni yocingo lapho kungenzeka khona umonakalo. Ngakho-ke, indawo yephutha iyatholakala, futhi ungathatha izinyathelo ezidingekayo zokuqeda, isibonelo, ufake ifoni entsha ukuze ubeke esikhundleni sendawo endala.
Ukusabalalisa nakho kuyiphutha lokulinganisa okukhanya okuhambisana nokushisa kwama-filaments ezikhanyeni zezibani nezibani. Kulokhu, konke kulula: udinga nje ukususa i-cap yokuvikela futhi ushintshe isici. Yiqiniso, abashayeli abaningi basimanje bathanda izibani zendabuko zendabuko ezingaphezulu kwezomnotho nezisebenzayo. Zihlanganisiwe ukuze zibe lula kulokho okubizwa ngokuthi "amateyipu", okwenza ngokucacile imoto yakho emgwaqweni. Ubukhulu be-diode bunokonga futhi bunomsebenzi wesikhathi eside wesikhathi esanele. Ngaphezu kwalokho, izici zokukhanyisa, ezitholakala kulolu hlobo lwamadivaysi alula, zinezinkomba eziphakeme kunezibani ezifanayo ezijwayelekile nezendabuko . Enye inzuzo engaqiniseki ukuthi isayizi yabo encane, kanye nezindleko eziphansi. Thenga amasha wokukhanya amasha ngokulinganisa kokubili uhlobo lokuqala nolwesibili lungatholakala cishe noma yisiphi isitolo sezitho zomzimba. Endaweni efanayo ungahlala uthintana futhi ukhethe ukuhlukahluka komumo wemoto emgwaqweni.
Uhlobo olwenziwe ngokwanele lokuhluleka kuyisifunda esifushane ku-wiring. Ukukhubazeka okunikeziwe kokulinganisa okukhanya kungaqedwa kuphela esiteshini sezinsizakalo ezikhethekile, ngoba kukhona zonke izinhlobo zamadivayisi wokuthola izinto "zokushiswa". Ngemuva kokudlula lesi sifo, uzokwaziswa ngokuningiliziwe ngesimo semoto yakho futhi uzokwenza wonke umsebenzi odingekayo.
Ukuhluleka okulandelayo kwezilinganiso zokukhanya ukuhluleka kwamadivaysi okushintsha ku- wiring kagesi womshini. Lokhu kungaba inkinobho, i-fuse, i-relay-switch kanye nezinye izinto eziningi zenethiwekhi kagesi. Lolu hlobo lokungasebenzi kahle ezimweni eziningi lungasuswa ngokushintshwa ngesikhathi kulezi zingxenye.
Ukuze uqiniseke ukuthi imoto yakho iyasebenza, kufanele ume nge-STO hhayi kuphela ngokuphazamiseka, kodwa futhi nokudlula ukuxilongwa. Lokhu kuzokuvikela wena nabathandekayo bakho.
Ukuphi izingonyama na? Izilwane Afrika ibhubesi. Wild isilwane ibhubesi